Hawgallo maalintii saddexaad ka socda magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Hawgallo maalintii saddexaad ka socda magaalada Galkacyo.
Maarso 2, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Mar 02 ? Waxaa magaalada Galkacyo ka socday dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey hawl-gallo baaxadleh oo lagu burburinayey dhammaanba goobaha sharci-darrada ah ee laga dhidbay dhinacyada waddooyinka magaalada.
Hawl-galladaan oo ay fuliyeen ciidanka dawladda hoose ee degmada Galkacyo oo gacan ka helaya ciidamada bilyeska iyo daraawiishta Puntland ee gobolkaan ku sugan, ayaa lagu banneeyey waddooyin ciriiri ahaa oo dhaxmari-jiray magaalada gaar ahaanna waddaada aadda garoonka diyraaraha ee magaalada Galkacyo.
Intii u socday hawlgalkaan waxaa la burburiyey dhismayaal iskugu jiray daaro-dhagax ah, carshaan, sandaqado, miisas iyo kabarro yaryar, waxaana dhammaan dhismayaasha la jajabiyey ay ahaayeen goobo ganacsi oo lagu iibin-jiray waxyaabo kala duwan.
Ciidamada ayaa hawl-kooda burburinta ah u adeesanayey Cagaf-cagafyo, Baaldoosarro iyo baabuurta iska-rogooyinka ah oo iyana lagu daabulayey qashinka iyo haraaga meelaha sharci-darrada ah ee la burburiyey.
Hawlgalka oo galay maantiisii saddex-aad ayeysan jirin wax caqabad ah oo ay la kulmeen ciidamadii fulinayey, waxaana xilli hore banneeyey goobahaasi dadkii degganaa kaddib markii ay heleen warka tilmaamay duminta goobahooda ganacsi, isla markaana la calaamadeeyey dhammaanba dhismayaasha la dumin-doono.
In ka badan 10 guri oo dhagax ah ayaa la dumiyey intii hawl-galku bilawday, waxaana sidoo kale haatan calaamadaysan in badan 30 albaab oo iyana ah dhismayaal dhagax ah kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay yihiin dhismayaal sharci-darro ah oo waddada soo galay, waxaana dhismayaashaasi ay ku teedsan-yihiin waddada aadda Airport-ka Galkacyo.
Hawlgalkaan haatan socda, waxaa ka sii horreeyey hawlgallo kale oo laga fuliyey Xerada Dayax ee magaalada Galkacyo, kaas oo lagu burburyey dhismayaal iyo goobo la tilmaamay in ay sharaci-darro ku dhisnaayeen, dhanka kalana lagu soo qabqabtay Xadid Khamri iyo maan-dooriyayaal kale iskugu jira iyo dadkii lahaaba.
C/fitaax C Geeddi
Agaasimayaal loo magaacabay afar ka mida guddoonnada waxbarashada Puntland.
Baahin: [Talaado], [March 1], Weriye Axmed Jookar……Boosaaso: Mark Bowden oo maanta ka dhoofay Boosaaso; guddoomiyaha gobolka Bari oo ka hadlay kulamadii ay la yeesheen wafdiga dawliga ah …Gaalkayo: Duqa Gaalkacyo oo lagu soo dhaweeyay Gaalkacyo, kadib markii uu shalay ka noqday is casilaaddiisii iyo kalfadhigii golaha degaanka oo furmay …Muqdisho: Ra?iisul-wasaare Farmaajo oo Muqdisho kula kulmay odayaal-dhaqameedyo …Dawladda Federaalka KMG ah oo ka hadashay dagaallo ay la gashay Al-shabaab …